“Barcelona waxba iskama beddelin kaddib imaatinka Xavi” – Van Basten – Gool FM
Dajiye December 6, 2021
(Barcelona) 06 Dis 2021. Halyeeyga kubadda cagta Holland ee Marco van Basten ayaa xaqiijiyay in kooxda Barcelona aysan waxba iska bedelin kaddib imaatinka tababaraha haatan ee Xavi Hernandez.
Marco van Basten ayaa u muuqday inuu difaacayo ninka ay isku wadanka yihiin ee Ronald Koeman, tababarihii hore ee Barca, kaasoo laga ceyriyay shaqada tababarnimo ee kooxda sababo la xiriira natiijooyinka liita ee muddadii ugu dambaysay ay la kulantay Blaugrana.
Halyeeyga kubadda cagta Holland ee Marco van Basten ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Barcelona waxay shaqada ka cayrisay Koeman, waxaana hadda kooxda ku sugan Xavi, laakiin waxba iskamay bedelin isaga, kooxda waxa soo food saartay dhibaato dhaqaale xumo sannadihii u dambeeyay.”
“Barcelona waa inay wax ka qabataa xaallada dhaqaale waqtigan xaadirka ah sida ugu macquulsan, si ay u awoodaan inay saxaan dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan.”
“Barcelona ciyaartoy ma iibsan karto, kooxda waxay haysataa 5 ama 6 ciyaartoy oo ay da’adooda tahay 18, 19, iyo 5 ama 6 da’ayar oo kale oo aan u adkaysan karin cadaadiska kooxda, kaddibna waa in aad wax ka qabataa taas, waa qaddar ku xukmineysa isaga fashil.”
Marco van Basten ayaa mar uu ka hadlay Memphis Depay, waxa uu yiri:
“Waxaan u maleynayaa inuu awoodo inuu wax ka qabto heerkan, laakiin kaliya wuu dhibtoonayaa sababtoo ah wuxuu qeyb ka yahay koox xun, haddii aad doonayso inaad ka mid noqoto koox wayn sida Barcelona oo kale, aad ayay u adag tahay marka kooxda daciifto, Memphis ma nasiib badna marka loo fiiriyo xaalada ay hadda ku sugan tahay kooxda.”